Dadka dalalka Spain iyo Italy ayaa ah kuwa dunida ugu caafimaadka badan… – Hagaag.com
Dadka dalalka Spain iyo Italy ayaa ah kuwa dunida ugu caafimaadka badan…
Posted on 3 Maarso 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Bloomberg ayaa ku dhaqaaqday dib u eegista 169 dal oo adduunka ka mid ah si ay u go’aamiyaan xaaladaha caafimaadkooda. Hadaba Maxay ahaayeen natiijooyinka?
Sahankan ayaa muujiyay in Spain ay tahay wadanka ugu caafimaadka badan dunida, waxaana ku xiga Talyaaniga, Iceland, Japan iyo Switzerland, halka Mareykanka uu ku jiro kaalinta 35aad.
Qiimeyntu waxay ku saleysan tahay (Bloomberg Healthiest Country Index) (2019), taas oo ku jirta 169 dal dhaqaalahooda iyada oo loo eegayo arrimaha keena caafimaadka dadweynaha.
Spain ayaa ku jirtay kaalinta lixaad daabacaadii sannadkii 2017.
Tobanka dal ee ugu sareeya caalamka marka la eego caafimaadka:
Waxaa lagu qiyaas qaatay sida wadamada ay u sameeyaan isbeddel gaar ah, oo ay ku jiraan isku celcelinta da’da laga filayo, iyada oo aad loo tixgeliyay isticmaalka tubaakada iyo cayilka. Waxaa kale oo ay tixgelisay arrimaha deegaanka oo ka mid ah helitaanka biyo nadiif ah iyo fay dhowr.
Spain ayaa waxay leedahay heerka ugu sarreeya ee isku celcelinta cimriga marka loo eego dalalka Midowga Yurub, waxaa sidoo kale hoos u dhacay tobonkii sano ee la soo dhaafay cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga xirma iyo dhimashada ka timaada cudurka kansarka.
Cilmibaarayaasha ayaa sheegaya in caadooyinka cunidda ay bixineyso caddeyn ah heerarka caafimaadka ee ay ku naaloonayaan Spain iyo Italy, dadka halkaasi ku nool waxay quutaan waxayaabaha ka soo baxa badda Mediterranean iyo saliida saytuunka “olives” iyo looska.
Dhinacaasi iyo North America, Canada ayaa ku jirta kaalinta 16aad halka Mareykanka iyo Mexico ku jiraan kaalimaha 35 iyo 53 sida ay u kala horeeyaan.
Dinaca qaarada Asia, South Korea ayaa ka soo hagaagtay sanadkii hore toddoba dhibic, waxayna ku jirtaa kaalinta 17aad, halka Shiinaha oo tirada dadkiisa 1.4 billion qof yahay uu galay kaalinta 52aad. Waxaa la filayaa in Shiinaha isku celcelinta cimriga uu dhaafi doono Mareykanka sanadka marka uu yahay 2040, sida laga soo xigtay machadka qiimeynta iyo tubta caafimaadka.